(၅)ရာသီခြင္(၅)ခု ဤသူအပေါင်းတို့သည်နှစ်များအတွင်းပြပွဲ၏ဖန်တီးသူပိုပိုပြီးအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ကဆက်ပြောသည်။ သူတို႔ရွိတဲ႔ ဒီဇိုင္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔ ဒီဇိုင္းေတြကိုဖန္တီးသူေတြကသူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုေျပာင္းလဲေစတဲ႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ေျပာင္းလဲလာၾကတာပါ။ တစ်လမ်းထဲမှာ,သငျသညျနယ်ပယ်တီနှင့်အတူအရပ်ရှည်ရှည်ပိန်လှီသူငယ်,သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဤဂိမ်းများတွင်ဇာတ်ကောင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်., အခမဲ့သမ်မာကမျြး၏စုဆောင်းခြင်းကိုသင်စီးရီးအတွက်ယင်းအချို့နှင့်ဂိမ်းမှတဆင့်အပြန်အလှန်အာကာသမှတဆင့်အချို့စွန့်စားအသက်ရှင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသစတဲ့ရသမျိုးစုံကိုအာရုံစိုက်ပေမယ့်တစ်ချို့ကတော့ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသစတဲ့ရသမျိုးစုံကိုအာရုံပြုပါတယ်။ သင္တို႔နဲ႔အတူအခ်ိန္ျပည့္ရွိေနဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ဒီကိုလာလိုက္ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်စုံလင်သောအသုံးပြုသူနှင့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးအပ်သည်။ အဲဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေအကုန်ရှိတယ်။ ပထမဦးစွာသင်တစ်ဦးချင်းစီကိုရှာဖွေနေပါက၊သင်ဆိုက်ပေါ်တွင်သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်နှင့်ဂိမ်းဖော်ပြချက်များမှတစ်ဆင့်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသောဘလူးတုသ်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာ,ကြှနျတေျာ့၏ပရိသတ်များအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းပြပွဲနှင့်၎င်းမှထွက်ပေါက်သောစိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်အောင်။ ရဲ့ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်သောလိင်ဂိမ်းများ၏စုဆောင်းမှုမှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူကြစို့ပြီးတော့သင်စနစ်တကျအပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့ကဲ့သို့လိင်ဂိမ်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုနှင့်အတူ,သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်ရဲ့လိင်စိတ်တော်နှင့်သငျသညျကွီး၏ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဒါပြုပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ပံုထဲကသိသာတဲ့အခ်က္ေတြကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာမိသားစုပါ ၀ င်တဲ့ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းဂိမ်းတွေမဆိုစုဆောင်းခြင်းဟာလိင်ဂိမ်းများကိုစွဲဆောင်သွားမှာဖြစ်လို့ဂိမ်းတွေရဲ့ဒီစုဆောင်းမှုမှာစွဲမက်ဖွယ်ညစ်ညမ်းအရေးယူမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။, ဒါကြောင့်,သငျသညျမိမိသမီးကိုညှဉ်းဆဲသူကိုဂျယ်ရီမြင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်,နွေရာသီဧကန်အမှန်ကသူ့ကိုသူမ၏တွင်းကိုကိုးကွယ်စေပြီးတော့နွေရာသီနှင့်ဗက်,သူတို့ဒါခက်ခဲလှစွာသောအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအစည်းအဝေးအတွက်တက်စီပွားရေးအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်.
သင့္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆံုးအမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေကာင္ေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆံုးအမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေကာင္ေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္လိင္အသားေပးအစီအစဥ္ေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင်လုပ်သောလိင်ရုပ်ရှင်ကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနည်းလမ်းများစွာအတွက်ခက်ခဲသူတို့ကိုငါပေးမည်။ သင်နဲ့လိုက်မယ့်ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာတော့ဂျက်စီကာ၊ဒင်နီရယ်ဆန်းချက်ဇ်၊တီမိုဝါနာ၊ဂရစ်ဇ်မန်း၊ဂရစ်ဇ်မန်း၊ဂရစ်ဇ်မန်း၊ဂရစ်ဇ်မန်း၊ဂရစ်ဇ်မန်း၊ဂရစ်ဇ်မန်းတို့ကိုတွေ့ရမှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွန့်စားခန်းများ၊ကြံစည်မှုလိုင်းများနှင့်ဤမျှလောက်ပိုသောဂိမ်းများပါ ၀ င်သည့်ဂိမ်းနှင့်အတူပါလာသောဆိုက်၏လိင်ဂိမ်းအမျိုးအစားရှိသည်။ အခြေခံအားဖြင့်,ဤအစွန့်စားမှုလိင်ဂိမ်းများကိုတစ်ဦးရေကြောငျးဖြစ်ရပ်တူခံစားရပါလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်သင်သွားနေရာတိုင်းမှာလိင်ရှိလိမ့်မည်.
ကြှနျတေျာ့စကြဝဠာ၌ရရှိနိုင်သောနည်းပညာ၏အဆင့်နှင့်အတူ,ဒါကြောင့်အစွမ်းထက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့လိုအပ်သမျှအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပိုပြီးဘာမျှရှိသည်။ ဒါကြောင့်စကားစုများ,ရွေးချယ်စရာများနှင့်အကြိုဖော်ပြချက်ရှိပါတယ်ကတည်းကသင်ဤမျှလောက်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစုဆောင်းမှုကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကစားခလုတ်ကိုထိလိမ့်မည်။ သင်ထိုသို့ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂိမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်ပေါ်ရှိစာမျက်နှာအသစ်တွင် ၀ င်လာလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင်ကစားနှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ပြန်ညွှန်းခံရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရလိမ့်မည်ဟုသေချာပါစေ။, ကျနော်တို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းဘယ်တော့မှကျနော်တို့တောင်မှအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရပ်ရွာအင်္ဂါရပ်များကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျဂိမ်းအောက်မှာမှတ်ချက်များစာပို့ခြင်းနှင့်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိုရမ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်,တားမြစ်ခြင်းမရှိသောနှင့်အခမဲ့သမ်မာကမျြးညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံ။